२०७६ भदौ २५ बुधबार ०९:०६:००
विनोदचन्द्र कोइराला काठमाडाैं
प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस बहालवाला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संसदीय परिपाटीमा प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको सत्तारुढ पार्टीलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने, गलत गर्न नदिने र आवश्यक परे सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दल हो । तर, कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो दल प्रतिपक्षी हो भन्ने तथ्य चटक्टै बिर्सिएको देखिँदै छ ।
यस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत मौन बस्ने गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वले विरोध गरेझैँ यदाकदा बोल्नेबाहेक सशक्त प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । संविधानले नै किटान गरिदिएको प्रतिपक्षी दलको नेताको संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नसमेत प्रतिपक्षी नेतृत्व चुकिरहेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता हरण भएको छ र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइएको छ । महँगी र दोहोरो–तेहेरो करको मारमा जनता परेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र संकटमा छ । यी र यस्ता यावत् विसंगति मुलुकले बेहोरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपथ्र्यो ?
भ्रष्टाचार, बेथिति, बलात्कारजस्ता काण्डको छानबिन गर्न सशक्त दबाब दिनुपथ्र्यो । सडक तथा सदन दुवै तताउन सकिन्थ्यो । यसो गर्न सकेको भए कांग्रेस कार्यकर्तामा मात्र होइन, आमजनतामा जागरण आउँथ्यो । कांग्रेसप्रति केही भरोसा जाग्थ्यो, तर किन भएन त ? यस्तो लाग्छ, सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति कायम छ ।
गएको निर्वाचनपछि इतिहासमै पहिलोपटक कांग्रेस निरीह बनेको छ । यस्तो लज्जास्पद परिणाम आउँदा कांग्रेस नेतृत्वले न्यूनतम इमानदारी र नैतिकता देखाउनुपथ्र्यो । तर, अहँ भएन, उल्टो दम्भ प्रदर्शन भइरहेको छ । यसको परिणाम कांग्रेसप्रति भरोसा गर्ने जनता निरास बनेका छन् । हालै सम्पन्न जागरण अभियानले समेत यही देखायो । स्वार्थ र सत्ताका लागि बेचिएको नेतृत्वबाट कसरी जागरण आउँछ ? बुझ्नेले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
नेकपा र सरकारको विरोधमा भाषणभन्दा बाहेक ऊभन्दा हामी राम्रो छौँ र राम्रो गर्छौं भन्ने आधार के ? त्यसको जवाफ जनतालाई कसरी दिने ? जवाफ दिन सकिँदैन भने जागरण कसरी आउँछ । विचार, सिद्धान्त, भावी कार्यदिशा, राजनीतिक अडान, पारदर्शिता, इमानदारी, नैतिकता, स्वच्छता, स्वाभीमानजस्ता गुण नभएपछि त्यस्तो नेतृत्वबाट जागरण आउला ?
यस्तो अवस्थामा भोलि कांग्रेसलाई पुनः भरोसायोग्य पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । आफू उदाहरणीय बन्न सके स्वतः अरूलाई जागृत गराउन सकिन्छ । तर, कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिले मसहुर सायर मिर्जा गालिवको सायरी सम्झना गराउँछ– उम्रभर गालिव यही भूल करता रहा धुल थी चेहरे पर वो आइना साफ करता रहा
#इतिहास # निरीह कांग्रेस
पहिलो महिला प्रहरी भन्छिन् : 'प्रहरीमा महिलालाई धेरै दुःख छ'
चित्रलेखाले इतिहास बनाइन् तर, नेतृत्वको उपेक्षाले सभामुख गुमाइन्
'सागको इतिहासमै बढी पदक नेपालको उपलब्धि'
समग्र साग इतिहासमा नेपालको १००औँ स्वर्ण
नयाँ भारतमा इतिहासको सम्मान
विश्व इतिहासकै ठूलो ठगीको नालीबेली : २३ खर्बभन्दा बढी ठगेर हराइन् ‘क्रिप्टोक्विन’